အလှအပရေးရာ Archives - BaHuThuTaGabar
“အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသားအရေ ကောင်းခြင်းဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက်”
“အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသားအရေ ကောင်းခြင်းဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက်” အသားအရေရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ အမည်းစက် စတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ ကင်းဝေးပြီး အဆီပြန် စေးကပ်နေတာတွေ မရှိဘူး၊ အရေးအကြောင်းတွေ မရှိဘူး၊ အသားအရောင်မညီညာဘဲ ညစ်ထေးနေတာမျိုး မရှိဘူး၊ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရေချိုးပြီးစလို ကြည်သန့်နေတာမျိုး၊ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ […]
“စားချင်သလောက်စားပြီး မဝတဲ့နည်းကို ဝေမျှလိုက်တဲ့ Food Blogger မလေး” နာမည်ကျော် Food Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရေဘက်ကာ ရေဘင် ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် Diet လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူမဟာ စားချင်တာကို စားချင်တဲ့အချိန်မှာ ထစားလိုက်ဖို့ကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ မငြင်းဆန်ခဲ့ပါဘူး။ […]
“ချွေးပေါက်တွေ ကျယ်နေလို့ အရမ်းစိတ်ညစ်နေလား? ဒီနည်းလမ်းလေးသာ သုံးလိုက်ပါ”
ချွေးပေါက်တွေ အရမ်းကျယ်နေလို့ သင် အရမ်းစိတ်ညစ်နေပါသလား။ လုံးဝ စိတ်မညစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းလေးက ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့သူတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒါဟာ မိတ်ကပ်လိမ်ပြီးတော့ အဆီပြန်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာလည်း မခက်ပါဘူး။ အင်မတန် လွယ်ကူ ရိုးစင်းပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့်ပစ္စည်းကလည်း […]
“ကိုယ်တွေ နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ…”
မနက်ခင်း အသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ ကိုယ်တွေ နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေး ဒီလိုအစွမ်းထက်မှန်း အခုမှသိရလို့ ကျေးဇူးပါ သွားတိုက်ဆေးကို မနက်တိုင်းသွားသန့်ရှင်း တောက်ပြောင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ ကင်းစင်ဖို့ အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာ မဟုတ်ဖူးနော်… သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အခြားဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့လည်း ရှိပါသေးတယ် … (၁) အမဲစက်နဲ့ […]
“ထိပ်ပြောင်များကို လပိုင်းအတွင်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ ကိုရီးယား ကင်မ်ချီ”
“ထိပ်ပြောင်များကို လပိုင်းအတွင်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ ကိုရီးယား ကင်မ်ချီ” ကိုရီးယား၊ ဂျပန်လူမျိုးတို့ အကြိုက် ချဉ်ပတ် တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ‘ကင်မ်ချီ’ က ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီးနောက် သုတေသီများ အသစ်ရှာဖွေတွေရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ကမ္ဘာ့ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကင်မ်ချီ စားသုံးခြင်းဖြင့် အစာကြေလွယ်ပြီး […]
“မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်အားခထဲက သိန်း(၅၀)တိတိ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး”
ပရိသတ်တွေက ချီချီလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ နေခြည်ဦးက Beauty Blogger တစ်ဦးအဖြစ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးလာရာမှ တဆင့် အခုဆိုရင် နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ နေခြည်ဦးက အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရိုက်ကူးနေရတဲ့ မင်းသမီး အဖြစ် နာမည်ကြီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
“သင်မသိသေးတဲ့ ငှက်ပျောခွံနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများ…”
“အသားအရေလှတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ… အမြဲလုပ်တဲ့ အချက် (၈) ချက်”
အသားအရေလှတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ… အမြဲလုပ်တဲ့ အချက် (၈) ချက် ၁ ။ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ အိပ်ရာမဝင်ဘူး..၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါစေ မိတ်ကပ်တွေကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး အိပ်ဖို့ကိုတော့ မမေ့ပါဘူး…. ၂ ။ လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ် လှုပ်ရှားမှုများပါတယ်….. ၃ ။ ခရင်မ်နေလောင်ခံ ခရင်မ်ကို […]
“တစ်ညတည်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ အရှင်းပျောက်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ …”
“တစ်ညတည်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ အရှင်းပျောက်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ …” ပွဲသွားခါနီး (ဒါမှမဟုတ်) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတာရှိရင် မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံပေါက်လာတာက ဆိုးတဲ့ခံစားချက်ကြီးပါ။ နောက်နေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ ၀က်ခြံပေါက်လာတတ်တာ သဘာဝပါ။ အကြောင်းကတော့ မနက်ဖြန်သွားရမယ့် ပွဲအတွက် စိတ်ဖိစီးနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုး ၀က်ခြံပေါက်လာရင်တော့ ဆေးခန်းပြစရာမလိုဘဲ တစ်ညတည်းနဲ့ […]